Hargeysa: Xaflad Lagu xusayay sanad-guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay maalintii dhagax-tuurka | FooreNews
Home wararka Hargeysa: Xaflad Lagu xusayay sanad-guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay maalintii dhagax-tuurka
Hargeysa: Xaflad Lagu xusayay sanad-guuradii 30-aad ee ka soo wareegtay maalintii dhagax-tuurka
Hargeysa (Foore)-Xaflad balaadhan oo lagu xusayay sanad guuraddii koowaad ee ka soo wareegtay kacdoonkii dhagax-tuurka ahaa ee 1982-kii ay Taliski Siyaad Barre kala hortageen aqoonyahanadii dhalinyaradii ururkii UFFO iyo ardaydii Dugsiyadda sare ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha beerta Xoriyadda ee magaaladda Hargeysa.
Xafladan oo ay soo agaasintay Dalladda ay ku bahoobeen ururadda dhalinyaradda Somalilad ee SONYO, waxa ka soo qeyb galay Wasiirradda Madaxtooyadda, dhalinyaradda iyo Ciyaaraha, Masuuliyiin ka tirsan xisbiyadda qaranka iyo Boqolaal qof oo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa.
Wasiirka dhalinyaradda iyo Ciyaaraha Somaliland Md. Cabdi Siciid Faahiye oo ka hadlay xuskaasi ayaa sheegay inuu u soo joogay dhacdadii dhagax-tuurka oo uu ka mid ahaa dhalinyaradii reer Hargeysa ee kaareyaashii ciidamaddii Soomaaliya kala hortagay dhagaxa.
“Waxaanu doonayay dawlad wanaag, waxaana halgankii dhagax-tuurka ka dhashay halgankii SNM ee dib loogu xoreeyay dalka. Nasiib wanaag SNM dalkii way xoraysay maantana waxaynu haysanaa dawlad wanaag oo dhalinyaraddu ha u badnaatee iyagaa dhaliyay oo doortay dawladdan,”ayuu yidhi Wasiirka dhalinyaradda iyo ciyaaraha.
Wasiirku wuxuu ugu baaqay shacbiga Somaliland min Salal illaa Badhan inay garab istaagaan xukuumadda iyo madaxweyne Axmed Siilaanyo si ay ugala shaqeeyaan qadiyadda ictiraaf doonka.
Wasiirka Ciyaaruhu wuxuu sheegay inay abuureen qorsheyaal badan oo ay ku kobcinayaan ciyaaraha dalka iyo ururadda dhalinyaradda.
Wasiirka wasaaradda Madaxtooyadda Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ka hadlay xuskaasi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maalinta dhalinyarada Somaliland ee 20-ka Feberwari oo ku beegan xiligii uu curtay kacdoonkii dhalinyarada iyo ardayda reer Somaliland ay kala hortageen dawladii Siyaad Barre.
Wasiirku waxa uu sheegay in Golaha Wasiirradu ansixiyeen dalabkii uu tilmaamay inay u soo gudbiyeen dalladda SONYO oo la xidhiidhay in 20-ka Feberwari loo aqoonsado maalinta dhalinyarada si ay u noqoto maalin fasax qaran ah.
Wasiirku wuxuu ku bogaadiyay dhalinyaradda kaalintii ay ka soo qaateen halgankii dib u xoraynta dalka, waxaanu sheegay inaanay xukuumaddu diyaar u tahay wax kasta oo dhalinyaradda lagu horumarin karo.
Waxa kale oo xafladaasi ka hadlay oo si qoto dheer uga waramay taariikhdii dhagax-tuurka Axmed Muxumed Madar oo ka mid ahaa aqoonyahanadii dhalinyaradii UFFO, waxaanu maalintaasi ku tilmaamay xiligii ay bulshadu si dhab ugu dhiidhiday dulmigii Taliskii Siyaad Barre.
Waxa iyaguna xafladan ka hadlay Guddoomiye Ku xigeenka Xisbiga UCID Jaamac Muxumed Hoori iyo Axmed Cabdi Daa’uud oo ka mid ah Gudida fulinta ee xisbiga UDUB waxaanay ka warameen taariikhdii maalintan iyo marxaladihii ay Somaliland soo martay, waxaanay xukuumadda ugu baaqday inay dedaal badan u gasho sidii dhalinyaradda loogu abuuri lahaa fursado shaqo.
Previous Post“Shirka Tallo ayaa lagu tagay, Somaliland khibradeeda ayay u gudbinaysaa caalamka” Next PostCiidammadda Ilaaladda Xeebaha Oo beeniyay in maleeshiyo ONLF ahi ka soo degeen xeebta Bulo-caddo